May 1, 2020 - Lupyo News
သိန်း(၁၅၀၀၀)ထီ ပေါက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြရာ သားလေးရဲ့ကံကြောင့်ဟုဆို…
သိန်း(၁၅၀၀၀)ထီ ပေါက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုပြောပြရာ သားလေးရဲ့ကံကြောင့်ဟုဆို… သားသားနဲ့အစ်မနဲ့အတွက် ရည်ရွယ်ပြီးထိုးတဲ့ အစောင်ကနေ သိန်း(၁၅၀၀၀)ထီ ပေါက်ခဲ့တာပါ… သားလေးရဲ့ကံကြောင့်လည်း အများကြီးပါတယ်လို့ ဝမ်းသာစကားဆိုလာတဲ့ ရန်ကုန်မြို့က ဒုတိယမြောက် ထီသိန်း(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှင်…။CeleGabar နေပြည်တော်လက်လုပ်တောင်တွင် ဘုရားလာဖူးရင်း ထီထိုးရာ ရန်ကုန်မှဘုရားဖူးမိသားစုသိန်းပေါင်းတစ်သောင်းခွဲဆွတ်ခူး နေပြည်တော်၊ လက်လုပ်တောင်သာဝက၊ ဗောဓိရိပ်ငြိမ်တောရဆရာတော်၏တပည့်သာဝက ရန်ကုန်မြို့နေ ဦးအောင်နေလ+ ဒေါ်ဝေဝေလင်း မှ လက်လုပ်တောင်ဘုရားဖူးခဲ့ပြီးကံစမ်းခဲ့သော ထီလက်မှတ်မှာ … (၁၅)ကြိမ်မြောက် သိန်း( ၁၅၀၀၀)ကံထူးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။နေပြည်တော်လက်လုပ်တောင် ရွှေနန်းသွင်းစေတီတော်မြတ်ကြီးဟာဗောဓိရိပ်ငြိမ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးတို့၏ မေတ္တာတန်ခိုးတော်များ…. အဓိဌာန်များပြည့်ဝရန် ကျင့်ကြံအားထုတ်မှုများ၊ဘုရားဒကာ၊ဒယိကာမများနှင့်လည်းစည်းကားတဲ့နေရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ————————– unicode သားသားနဲ့အဈမနဲ့အတှကျ ရညျရှယျပွီးထိုးတဲ့ အစောငျကနေ သိနျး(၁၅၀၀၀)ထီ ပေါကျခဲ့တာပါ… သားလေးရဲ့ကံကွောငျ့လညျး အမြားကွီးပါတယျလို့ ဝမျးသာစကားဆိုလာတဲ့ ရနျကုနျမွို့က ဒုတိယမွောကျ ထီသိနျး(၁၅၀၀၀)ကံထူးရှငျ…။CeleGabar နပွေညျတျောလကျလုပျတောငျတှငျ ဘုရားလာဖူးရငျး ထီထိုးရာ ရနျကုနျမှဘုရားဖူးမိသားစုသိနျးပေါငျးတဈသောငျးခှဲဆှတျခူး နပွေညျတျော၊ လကျလုပျတောငျသာဝက၊ ဗောဓိရိပျငွိမျတောရဆရာတျော၏တပညျ့သာဝက … Read more
အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်း ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်မယ်..
အိမ်ထောင်ဖက်ကောင်း ဟုတ်မဟုတ် ကိုယ်တိုင် တွက်ကြည့်မယ်.. မန်မာ့ရိုးရာ မဟာဘုတ် ဗေဒင်ပညာမှအိမ်ထောင်ရေး အဟောများ အကုန်မမှန်ပါ လူ ၁၀၀ မှာ ၈၀% ဖြစ်ကြရတတ်တယ်လို့ ဆိုလိုရင်းသာဖြစ်ပါတယ် တွက်နည်း” မိမိ၏ မြန်မာမွေးခုနှစ်ကို ၇ ဖြင့် စား၍ အကြွင်း ၁ ရသော ယောင်္ကျားလေးဖြစ်ပါက အကြွင်း ၁(ကျား)ဆိုသော အဟော မိန်းကလေးဆိုပါက အကြွင်း ၁ (မ) ဆိုတဲ့ အဟောကိုဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်ပါတယ်။ အကြွင်း ၁ (ကျား) အကြွင်း ၁ ရရှိသော ယောင်္ကျားလေးများသည်။ များသာအားဖြင့် အိမ်ထောင်တစ်ဆက်ထဲ ကျတတ်ကြပါတယ်။ မိမိဘက်က အိမ်ထောင်ဘက်အပေါ်ကို သည်းခံ၍ ပေါင်းသင်းပေမယ့် အိမ်ထောက်ဘက်က မိမိအပေါ်ကို ကြပ်ကြပ်မကောင်းလျှင်တော့ နောက်အိမ်ထောင် ၂ ဆက် ၃ … Read more
ကျောင်းတွေပြန်မဖွင့်နိုင်ခဲ့ရင် အွန်လိုင်းကနေ စာသင်ဖို့ စီစဉ်နေဟု ဦးဇော်ဌေးပြော …
ကျောင်းတွေပြန်မဖွင့်နိုင်ခဲ့ရင် အွန်လိုင်းကနေ စာသင်ဖို့ စီစဉ်နေဟု ဦးဇော်ဌေးပြော . . . ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စမ်းသပ်မှုတွေ လုပ်နေပါတယ်။ COVID-19 ဂယက်ကြောင့် ဇွန်လမှာ ကျောင်းပြန်ဖွင့်မနိုင်ခဲ့ရင် အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့် စာသင်နိုင်အောင် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနက စီစဉ်နေကြောင်း နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောလိုက်ပါတာ်။ ဒီနေ့ မေလ ၁ ရက်နေ့မှာ သတင်းထောက်တွေနဲ့ နိုင်ငံတော်သမ္မတရုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ Video Conferencing ပြုလုပ်ရာမှာ ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာ COVID-19 အခြေအနေကြောင့် ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ ကန့်သတ်မှုအားလုံးကို မေလ ၁၅ ရက်နေ့အထိ သတ်မှတ်ထားတာဖြစ်တာကြောင့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်းအဖြေလွှာစစ်ဆေးမှုတွေ၊ အခြေခံပညာကျောင်းတွေ ပြန်ဖွင့်ဖို့ စီစဉ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေအားလုံးကို ဆိုင်းငံ့ထားတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ COVID-19 ကူးစက်ပျံ့နှံ့မှု ကြာနေရင်တော့ တရုတ်နိုင်ငံတွေက စာသင်ကျောင်းတွေမှာ အသုံးပြုတဲ့ ကလေးတွေ … Read more
ဦးပဇင်း (ဦးကျော်ဟိန်း) ရဟန်းပြုကာစနှင့်မတူ ပြောင်းလဲသွားပုံ …
ဦးပဇင်း (ဦးကျော်ဟိန်း) ရဟန်းပြုကာစနှင့်မတူ ပြောင်းလဲသွားပုံ . . . တိုကျိုမြို့မှာ တရားဟောနေတဲ့ ဦးပဇင်း ဦးကိတ္တိသာရ(ဦးကျော်ဟိန်း)ပြောင်းလဲသွားပုံ-မနေ့ညက ဂျပန်နိုင်ငံတိုကျိုမြို့မှာ တရားဟောနေတဲ့ ဦးပဇင်းဦးကိတ္တိသာရ (ဦးကျော်ဟိန်း)ရဲ့ တရားကိုfbပေါ်ကနေliveလွှင့်နေတာကိုဖွင့်ကြည့်ရင်း နာယူနေမိတယ်။ ရဟန်းပြုကာစတုန်းက အခြေအနေတွေနဲ့လုံးဝမတူတော့ဘဲပြောင်းလဲသွားတာကို ဦပဉ္ဇင်းဟောချက်တွေက သက်သေပြနေပါတယ်။ရဟန်းဝါ (၁၀)ဝါအတွင်းမှာ အကျင့်ဘက်ကို ဘယ်လောက်တန်ဖိုးထား ကျင့်ကြံခဲ့သလဲဆိုတာ ရွေးချယ်လိုက်တဲ့စကားလုံးတွေနဲ့ အသံနေအသံထားကတဆင့်အဖြေထုတ်နိုင်ပါတယ်။ တရားနာယူရင်း ကြည်နူးကျေနပ် အားကျစိတ်နဲ့အတူ၁၉၉၆ခုနှစ်တုန်းက အတူလက်တွဲရိုက်ခဲဖူးကြတဲ့ “ဝေလည်းမွှေး ကြွေလည်းမွှေး” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား ရိုက်ကွင်း တွေဆီစိတ်ရောက်သွားမိပြန်ပါသေးတယ်။ ရိုက်ကွင်းမှာငြင်းရခုန်ရ အပြန်အလှန်နားလည်မှုယူခဲ့ကြတာတွေဟာ ဦးကျော်ဟိန်းအတွက် အဲဒီနှစ် ဇာတ်ပို့အကယ်ဒမီ ရစေခဲ့လို့ အကယ်ဒမီပွဲမှာ ကြည်နူးဝမ်းမြောက်နေတဲ့ ဦးကျော်ဟိန်းရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်း ပြန်မြင်ယောင်မိပါတယ်။ အဲဒီဇာတ်ကားရိုက်ခဲ့ပြီးနှစ်အတော်ကြာတော့ ဦးကျော်ဟိန်းကသာသနာ့ဘောင်ထဲရောက် တင့်တင့်ထွန်းက သီလရှင်ဘဝကိုအပြီးတိုင်ကူးပြောင်း ဒွေး (သားကြီး)က အရွယ်ကောင်းတုန်းအောင်မြင်တုန်းမှာ ဘဝတစ်ပါးကူးပြောင်းကိုယ်က ရုပ်ရှင်တွေသီချင်းတွေကိုကျောခိုင်းပြီးဓမ္မရိပ်ကိုခိုလှုံကူးပြောင်းနဲ့ … Read more
မွေးခန်းထဲမှာ သားဖွားမယ့်မိန်းကလေးကို မှုတ်ပေးရတဲ့ ဆရာဝန်တစ်ယောက်ရဲ့ အဖြစ်…
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူများကို အခြေခံစားသောက်ကုန် ခြောက်မျိုး ထောက်ပံ့မည်
တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူများကို အခြေခံစားသောက်ကုန် ခြောက်မျိုး ထောက်ပံ့မည် မန္တလေး၊ ဧပြီ ၃၀ ပြည်ထောင်စုအစိုးရက တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ပြည်သူများထံသို့ အခြေခံစားသောက်ကုန်များ ထောက်ပံ့နိုင်ရန် စီမံချက် ရေးဆွဲလျှက်ရှိကြောင်း မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ရှမ်းတိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဦးစိုင်းပန်းဆိုင်က ပြောကြားသည်။ အသက်အရွယ် အပိုင်းအခြား ခွဲခြားမှုအရ စားသုံးနိုင်သည့်အတိုင်းအတာကို သိရှိနိုင်ရန် အသက် ၁၂ နှစ်အောက်၊ အသက် ၁၂ နှစ်မှ ၄၀ နှစ်၊ အသက် ၄၁ နှစ်နှင့်အထက်ဟူ၍ ခွဲခြားကောက်ယူမှုများ ပြုလုပ်လျှက် ရှိသည်ဟု ၀န်ကြီးက ဆိုသည်။ ” ခြောက်မျိုးထောက်ပံ့မယ့် အစီိအစဉ်ပါ။ စီစဉ်ထားဆဲပါ ” ဟု ၎င်းက ပြောသည်။ သင်္ကြန်မတိုင်မီ ဧပြီလဆန်းပိုင်းတွင်လည်း တစ်နိုင်ငံလုံးရှိ ၀င်ငွေနည်းပါးသည့် လက်လုပ်လက်စားများကို အစိုးရက အခြေခံစားသောက်ကုန် … Read more
မရောင်းရတဲ့ ထီလက်မှတ်များ အလွန်များနေပါသဖြင့် ယနေ့ထီဖွင့်ပွဲ မပြီးပါ
မရောင်းရတဲ့ ထီလက်မှတ်များ အလွန်များနေပါသဖြင့် ယနေ့ထီဖွင့်ပွဲ မပြီးပါ မရောင်းရတဲ့ ထီလက်မှတ်များ အလွန်များပြာနေသည့်အတွက် ယနေ့မေလ (၁)ရက်နေ့ ထီဖွင့်ပွဲ မပြီးပါ… ရန်ကုန်၊ မေလ (၁)ရက် ကျပ်တစ်ထောင်တန် (၁၅) ကြိမ်မြောက်ထီဖွင့်ပွဲကို ဒီနေ့မေလ (၁) ရက်မှာ အပြီးဖွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ပဲ မေလ (၂) ရက်နေ့မှသာ ဆုမဲတွေကို ဆက်ရွေးချယ်နိုင်တော့မယ်လို့ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲက သိရပါတယ်။ ဒီနေ့မှာ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ထီပေါက်စဉ်အများစုဟာ မရောင်းချရတဲ့ ထီလက်မှတ်တွေဖြစ်နေတာကြောင့် ထီဖွင့်ပွဲမပြီးသဖြင့် ထီပေါက်စဉ် ထွက်လာနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ သိရပါတယ်။ “ထီတွေအများကြီးကျန်နေလို့ အကြာကြီးဖွင့်နေရတယ်။ လောလောဆယ် တစ်ရက်နဲ့တော့မပြီးနိုင်ဘူး။ ပေါက်ဂဏန်းက မရောင်းရတဲ့ထီတွေအများကြီးပါနေလို့ တစ်ရက်ထဲနဲ့ဖွင့်လို့မရနိုင်ဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ (၂) ရက်လောက်ဖွင့်ရမယ်။” လို့ အောင်ဘာလေသိန်းဆုဌာနခွဲက လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူး ဦးကျော်သန့်လွင်က ပြောပါတယ်။ ———————— unicode … Read more
ကြိုက်တဲ့သူတွေများပေမယ့် ခုချိန်ထိ ဆင်ဂယ်ဘဝကိုပဲ မစွန့်လွှတ်နိုင်သူတွေရဲ့ ခံယူချက်များ
ကြိုက်တဲ့သူတွေများပေမယ့် ခုချိန်ထိ ဆင်ဂယ်ဘဝကိုပဲ မစွန့်လွှတ်နိုင်သူတွေရဲ့ ခံယူချက်များ တစ်ချို့လူတွေက ဆင်ဂယ်ဘဝဟာ အထီးကျန်တယ်လို့ ထင်တတ်ကြပေမယ့် တစ်ချို့တွေကျပြန်တော့ အဲဒီ့ ဆင်ဂယ်ဘဝကိုပဲ ခုံမင်ပျော်ရွှင်နေတတ်ကြပါတယ်..။ ဘယ်လိုလူတွေက ဆင်ဂယ်ဘဝကို နှစ်သက်တတ်ကြလဲဆိုတော့ လွတ်လပ်မှုကို မြတ်နိုးသူတွေ၊ အနှောင်အဖွဲ့တွေကြားမှာ မနေထိုင်ချင်ကြသူတွေနဲ့ ဘဝရဲ့ တကယ့်အဓိပ္ပါယ်အစစ်အမှန်ကို ရှာဖွေချင်ကြတဲ့ သူတွေအများစုက ဆင်ဂယ်ဘဝကို နှစ်သက်ကြပါတယ်တဲ့နော်.. ဒီတော့ သူတို့မှာ ဘယ်လိုခံယူချက်တွေကြောင့် ဆင်ဂယ်ဖြစ်နေလဲဆိုတာကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်..။ မျှော်လင့်ချက်တွေ မဆုံးရှုံးဘူး..။ လူတွေထင်တာက ဆင်ဂယ်ဖြစ်နေရင် ဘဝက ပျော်စရာမကောင်းတော့ဘူး၊ ခြောက်သွေ့ပြီး အထီးကျန်ဆန်လွန်းတယ်ပေါ့။ ဒီလို ထင်မြင်ယူဆချက်တွေက တကယ့်ကို မှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာကို ဆင်ဂယ်တွေကတော့ တကူးတက လိုက်ရှင်းပြလေ့ရှိမယ်တော့ မထင်ပါဘူး..။ ဆင်ဂယ်ဆိုတာ တစ်ခြားသူတွေထက် မျှော်လင့်ချက်တွေ ကြီးမားသွားတဲ့အခါ ဖြစ်သွားတတ်ကြတာပါ။ ဘဝမှာ လွတ်လပ်မှုဆိုတဲ့ အရသာကို … Read more
သင့်ချစ်သူဟာ တခြားတစ်ယောက်ဆီ စိတ်ရောက်နေမှန်း သိသာတဲ့ လက္ခဏာ (၅)မျိုး …
သင့်ချစ်သူဟာ တခြားတစ်ယောက်ဆီ စိတ်ရောက်နေမှန်း သိသာတဲ့ လက္ခဏာ (၅)မျိုး … အချစ်ရေးတစ်ခုဟာ နှစ်ဦးနှစ်ယောက်နဲ့ တည်ဆောက်ထားရတဲ့ နှစ်ယောက်ပိုင် ကမ္ဘာလေးတစ်ခုဆိုလည်း မမှားပါဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် အပြန်အလှန် ဂရုစိုက်ခြင်း၊ ချစ်ခြင်း၊ စွဲလန်းခြင်းတွေရှိမှာ အချစ်ရေးတစ်ခုက အဆင်ပြေသလို ရှေ့ဆက်လို့ရတာပါ။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ဖက်ဖက်က ချစ်ခြင်းတွေ လျော့လာတယ်၊ စိတ်ဝင်စားမှုတွေ လျော့လာတယ်၊ အာရုံက တခြားကိုပဲ ပျံ့လွင့်နေတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ဒီအချစ်ရေးတစ်ခုဟာ ရှေ့ဆက်လို့ မရတော့ပါဘူး။ ခုဖော်ပြပေးမှာကတော့ သင့်ချစ်သူဟာ သင့်ဆီမှာ စိတ်မရှိတော့ကြောင်း ဖော်ပြနေတဲ့ လက္ခဏာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။ (၁) ပြောစရာစကားတွေမရှိဘူး … သင်တို့နှစ်ယောက်ကြားမှာ ပြောစရာကိစ္စတွေ၊ အကြောင်းအရာတွေ မရှိဘူး။ စကားဝိုင်းဟာ တိတ်ဆိတ်နေပြီး သင့်ချစ်သူက ဖုန်းနဲ့ပဲ တစ်ချိန်လုံး ဂိမ်းဆော့နေတာမျိုး၊ သင့်အကြောင်းကို ဘာမှမေးမြန်းခြင်း မလုပ်တာမျိုးတွေက … Read more
ဘူးသီးနုနုခူးစားလို့ သိန်းတစ်ထောင်ကျော် အလိမ်ခံလိုက်ရတဲ့ ဘိုးတော် မလေးရှားနိုင် ငံက ဦးထန်ဆိုတဲ့ နာမည်ပြောင်ရှိတဲ့သူတယောက်က ကောင်မလေးတွေ ငယ်ငယ်လေးတွေနဲ့ တွဲတဲ့နေရမှာနာမည်ကြီးတဲ့သူပါ။ သူအိမ်နီးနားချင်း လူငယ်တွေဆို သူ့ကို သဘာကျကြတာပေါ့.. အသက်ကြီးနေပေမယ့် ကောင်မလေးငယ်ငယ်လေးတွေဘဲ သူကတွဲနေတာကိုး ဒါေ ပမယ့် အခုသူနောက်ဆုံးထားတဲ့ သူရဲ့ကောင်မလေးလေးဟာ ရင်းဂစ် ၄ သိန်းကျော် ၊မြန်မာငွေနဲ့ဆို သိန်း ထောင့်တစ်ရာကျော် လိမ်လည်သွားခဲ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးက သူနဲ့လိင်ဆက်ဆံဖို့ဖြားယောင်းခဲ့ပြီး ရင်းဂစ် ၄ သိန်းကျော် ၊မြန်မာငွေ သိန်း တစ်ထောင်ကျော်လိမ်လည်သွားခဲ့တာပါ။ အဘိုးကြီးက သူအလိမ်ခံရတော့ ရဲတိုင်ပါတယ်။ ရဲတိုင်မှ ပိုဆိုးကုန်ပြီး သူ့ရဲ့ အမူ့ဟာလဲ မလေးရှား ဖေ့စ်ဘုတ်သုံးတဲ့သူတွေများအကြား နာမည်ကြီးလာပါတယ် လူမူကွန်ယက်အသုံးပြုသူတစ်ချို့ကတေ့ာ အဖိုးကြီးကို ငွေလိမ်လည်သွားတဲ့ ကောင်မလေးကို အပြစ်တင်ခဲ့ပြီး တစ်ချိ… CRD ————————— … Read more